I-iPhone 6s Plus vs Samsung Galaxy S7: Ukuxhathisa kwamanzi [Ividiyo] | IPhone iindaba
UIgnacio Sala | | Ukhuphiswano, IPhone 6s Plus
Emva kokuphehlelelwa kwezixhobo ezitsha ezinokuma kwimodeli yamuva ye-iPhone ngokwendlela yokusebenza, sinyanzelekile ukuba siqhubeke nokuthetha ngeGPS S7, ethi le nguqulo intsha ikhupha ukhuseleko emanzini. Kuninzi okuthethwayo kwezi veki zidlulileyo malunga nokuba i-iPhone 7 nayo inalo ukhuseleko lwe-IP68 njenge-Galaxy, kodwa amarhe amva nje aqinisekisa ukuba le nto ayisiyonto ibalulekileyo kwi-Apple kunye nesixhobo sayo esithengisa kakhulu.
Emva kokuphehlelelwa kwee-iPhone 6 kunye nee-6s Plus, zininzi iibhlog ezizame ukuvavanya ukunganyangeki kwamanzi kule modeli. Kumaxesha amaninzi i-iPhone iphume ingonzakalanga kwaye ikwazile ukugcina indawo yangaphakathi ingangeni manzi yesixhobo ngaphandle kokungasiniki isatifikethi esihambelanayo.
Emva kokuphehlelelwa kweGPS S7, iividiyo ezininzi sele ziqalile ukujikeleza apho sinakho jonga ukuba yeyiphi le mizekelo mibini iyamelana neempembelelo. I-iPhone ibonakalise ukuba yitanki lokwenyani kwaye iyanyamezela ukothuka ngamandla, igcina umgama. Ugxa wam uPablo, upapashe ividiyo apho ukuxhathisa ukuwa kwezixhobo zombini kuthelekiswa.
U-Apple akabangi nangaliphi na ixesha ukuba i-iPhone 6s Plus iyamelana namanzi kwaye oko kubonakaliswa emva kwemizuzu eli-15. Emva kokuntywiliselwa imizuzu eyi-15 emanzini, i-iPhone ibuyela umva kwaye iyeke ukusebenza ngenxa yomonakalo wamanzi. Isamsung ye-Samsung S7 ineqhayiya nge-IP68 evumela ukuba isixhobo singene ngaphakathi ukuya kuthi ga kwiimitha ezi-3 ubunzulu ngaphandle koxinzelelo oluchaphazela isixhobo, ngaphandle kokungafakwanga indawo yokuxhuma encinci ye-USB.
Ukuba kweli hlobo ufuna ukuthatha i-iPhone 6s yakho uye nayo elwandle, eyona nto intle yile fumana enye yezindlu ezibizayo ezikhusela emanzini nothuliNgaphandle koko, ufuna iselfowuni iwele emanzini ngokungakhathali kwaye awukwazi ukuyifumana kwakhona. Ngaphandle kokuba sisithuba esifutshane sexesha, njengoko sibona kwividiyo, i-iPhone 6s Plus iyakwazi ukuxhathisa ukungena kolwelo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Iifowuni zePhone » IPhone 6s Plus » I-iPhone 6s Plus vs Samsung Galaxy S7: Ukuxhathisa kwamanzi [Ividiyo]
Izipele ze-ICloud azikhuselekanga njengesixhobo se-iOS sokubuyiselwa kwedatha